Afar Reer Haruun ah iyo Ina Maryama Agan oo Is Arkaya – Rasaasa News
Oct 12, 2009 Eritrea, Jwxo-shiil, Massawa
Warar aanu ka helay Swisserland ayaa waxay cadaynayaan in dhawaan ay isku arki doonaan magaalada magaalada Fribourg ee dalka Swisserland, Afar reer Haaruun ah iyo Ina Maryama Agan oo laga soo masaafuriyey dalka Ertitrea, kadib kolkii laga xidhay xero tababar oo ay kooxda Jwxo-shiil ku taakulayn jirtay dhibaatooyinka ay ku hayaan halganka.
Waxaa baryahanba cakiraa dhidhaabtooyinkii dhaqaale urursiga ahh ee ay bulshada Somalida Ogadeeniya ku haysay kooxda Jwxo-shiil, ka dib kolkii ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya fahmeen guddo iyo dibadba. Kooxdan oo waxyeelo weyn u gaystay halgankii ay lahaayeen dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ay horseedka ka ahaan jirtay Jabhadii la odhan jiray ONLF, oo iyadu daaqada ka sii baxaysay.
Kulankan oo ah kulan dhuumaal ah ayaa waxaa tagidoona gacan ku dhiigle Jwxo-shiil, oo ku sugaan labadii bilood ee ugu dambaysay dalka Ingriiska, isaga oo ay booliska Ingriisku labo goor su,aalo ka weydiiyeen dambiyo loo haysto iyo waliba dacwado laga geeyey oo loogu haysto dad uu ku laayey gudaha Ogadeeniya.
Jwxo-shiil, ayaa waxaa haya xanuun aad u adag oo uu isbitaal ugu jiray muddo, ayaa waxaan lagu arag fagaarayaalka, waxaa kale oo uu ka fogaaday saxaafada, si uu u baabi,iyo dambiyadii uu ka galay halganka, Naftood hurayaalka, Jabhadaha iyo guud haan ummada Somalida Ogadeeniya.
Kooxda uu ka tirsan yahay Jwxo-shiil, ayaa waxay u kala jabtay afar koox oo mid uu hogaamiyo ina Ismaaciil, ina Mukhtaar, aqoonleeyda iyo isaga. Inta ayna u kala jabin afartan koox ayaa waxaa ay damacday kooxdu in ay abaabusho kulan ay dadka ku beerlaxawsanayaan in ay ku badalayaan Jwxo-shiil, hase yeeshee Jwxo-shiil ayaa ka diiday waxayna kaliftay in ay afar u kala jabaan.
Is araga Swiserland, ayaa u xidhan koox gaara ah, waxaana ugu badan waxyaabaha ay iska arkayaan arin cusub oo ah, xukuumada Eritrea bishan horaanteedii xidhay xeradii tababarka ee ay kooxda Jwxo-shiil ku lahaayeen Musawac [massawa]. Waxaa loo sheegay dadkii wakiilka eritrea uga ahaa in la xidhay xerada xukuumada Eritrea-na ayna siin doonin wax dhaqaale ah kooxda Jwxo-shiil, waxaana soo foodsaartay dadkii halkaas u joogay Jwxo-shiil dhibaato waxayna aadeen xero qaxooti oo halkaasi ku taal. Arintan ayaa dhabar Jabweyn ku ah Jwxo-shiil, oo meesha kaliya ee uu ka dhaqdhaqaaqi jiray ay ahayd taageerada ay siin jirtay xukuumada Eritrea, taas oo dhibaato weyn u keentay halganka ummada Somalida Ogadeeniya.
Gacan ku dhiigle Jwxo-shiil, oo ay sugayso in laga jaa,iseeyo dilalkii xaqdarada ahaa ee uu gaystay dad shaca ah iyo naftood hurayaal qaali ah, xiliga ay doonto han noqotee, ayaa waxaa uu ku jiraa cimri dheeraysi. Ha ogaato isaga iyo kuwa wali dabo socdaa in ayna suurto gal ahayn in si sahal ah loo iloobo dilalkii ay gaysteen , gaar ahaan halgame Dr. Dolal oo ilaa iyo hada aan arintii dilkiisa meela la saarin.